The Flowers of War ( 2011 ) - Myanmar Asian TV
တရုတ်နှင့်ဂျပန်စစ်ဖြစ်နေချိန်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပြီး war-drama ဇာတ်လမ်းပုံစံပါ …
သူ့ခေတ်သူ့အခါက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကားဆိုလဲ မမှားပါဘူး ….
၁၉၃၉ တရုတ် – ဂျပန် စစ်ပွဲတုန်းက နန့်ကင်းမြို့ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ပုဒ်ကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာပါ …
House of Flying Daggers , The Great wall အစရှိတဲ့ကားတွေကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့ Director ကြီး
Yimou Zhang ရဲ့ 2011 ထွက် လက်ရာလေးပေါ့နော် …
ကြည့်ပြီးသားလူတွေလည်းရှိလောက်ပေမယ့် ပြန်ကြည့်ချင်လို့ပါ …??
Ratingမှာလည်း IMDb 7.4, Rotten Tomatoes 42%,Roger Ebert 2/4 ထိရရှိထားတဲ့ကားလေးပါ …
ဆူးဆိုတဲ့ မိဘမဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်က နောက်ကြောင်းပြန်နေတဲ့ပုံစံ နဲ့ စတင်ထားပါတယ် …
၁၉၃၉ ခုနှစ် တရုတ်-ဂျပန်စစ်ပွဲမှာ ဂျပန်တွေရဲ့ တရုတ်တွေအပေါ် ရက်စက်ယုတ်မာမှုတွေကို တွေ့ရမှာပါ …
ဂျွန်မီလာဆိုတဲ့ အမေရိကန်လူမျိုးသုဘရာဇာက ဆူးတို့ရဲ့ ဖာသာကို မြေမြှုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်နဲ့ နန့်ကင်းမြို့ကို ရောက်လာပါတယ် …
အဲဒီမှာပဲ ဆူးတို့နဲ့တွေ့ပြီး ဆူးတို့လို ကျောင်းသူလေးတွေကို ဘယ်လိုတွေ ကူညီပေးမလဲ ?
မို ဆိုတဲ့ပြည့်တန်ဆာမလေးကရော ဘယ်လိုရောက်လာမလဲ ?
မို နဲ့ ဂျွန်မီလာ နဲ့ရော ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ?
မိုတို့ ပြည့်တန်ဆာတွေကို ဆူးတို့တွေကရော ကြည်ဖြူနိုင်ပါ့မလား ?
ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ ခံစားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ …
စစ်ပွဲကြားမှာ drama လေးထည့်ထားလို့ စစ်ကားပဲ အသတ်အဖြတ်တွေပဲနေမှာလို့ မထင်ကြပါနဲ့ဆိုတာပြောကြားရင်း ?
P.s: ငိုတတ်ရင် tissue ဆောင်ထားပါလို့ ?
( ဘာသာပြန်သူနှင့်အညွှန်းကတော့ အခု Two Cops ကိုပြန်ပေးနေတဲ့ Khant Ko Aungပါ )
Translator : Khant Ko Aung
Actors: Atsuro Watabe, Christian Bale, Ni Ni, Shawn Dou, Shigeo Kobayashi, Tong Dawei, Zhang Xinyi
Openload.co Myanmar988 MB Download Soliddrive.co Myanmar988 MB Download
Trailer: The Flowers of War ( 2011 )